हो’शियार ! को’रोना संक्र’मण भएका मानिसले भुलेर पनि नखानुहाे’स् यी खानेकुराहरु : – Sadhaiko Khabar
हो’शियार ! को’रोना संक्र’मण भएका मानिसले भुलेर पनि नखानुहाे’स् यी खानेकुराहरु :
प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ ०१, २०७८ समय: १२:१५:१३
हो’शियार ! को’रोना संक्र’मण भएका मानिसले यी खानेकुराहरु भुलेर पनि नखानुहाेस् ! को’रोना संक्र’मण भएपछि खानेकुराहरुमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । जुन खानेकुराले हाम्रो शरीरलाई बलियो बनाउन मद्धत गर्दछ भने रोग प्रतिरो’धात्मक क्षम’तालाई पनि कम’जोर हुनबाट बचा’उँछ त्यस्ता खानेकुराहरु मात्र खाने गर्नुपर्छ । को’रोना संक्र’मित भएका व्यक्तिले निम्न खानेकुराहरुबाट टा’ढै बस्नु होला ।
१) मसालेदार खाना:- को’रोना लागेको व्यक्तिले धेरै मसालेदार खानाको से’वन गर्नु हुँदैन । थोरै मसाला ठिक हुन्छ तर धेरै से’वन गर्नाले यसले नका’रात्मक रुप लिन सक्छ । को”रोना लागेको व्यक्तिमा रो’ग प्रतिरो’धात्मक क्षमता’को क’मी भएको हुन्छ ।
त्यसैले मसालेदार खानाको सट्टा सादा र पोषिलो खानामा ध्यान दिन आवश्यक छ । खानामा खिचडीको प्रयोग पनि राम्रो मानिदै आएको छ । खानामा खिचडीको प्रयोग गर्दा खाना छिट्टै पच्छ र स्वा’स्थ्यका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
२) तारेको खानेकुराहरु:- बनाउन सजिलो भएता पनि तारेको खानाले हाम्रो शरीरललाई भने फाइदा गर्दैन । तारेको खानामा अस्व’स्थ बो’सोको मात्रा बढी रहेको हुन्छ जसले गर्दा पच्न गा’ह्रो हुन्छ । तारेको तथा फ्राई गरिएको खानेकुराले शरीरको तौल बढ्ने गर्दा यसले अन्य रो’गहरु पनि निम्त्या’उने गर्छ ।
३) प्याक गरिएको खाना:- को’रोना संक्र’मित भएका व्यक्तिले प्याक गरिएको खानाबाट टाढै बस्न आवश्यक हुन्छ । यो खानेकुरा बा’सी हुने भएकाले यस किसिमका खानेकुरामा शरीरलाई चाहिने पोषक तत्वकोे क’मी हुन्छ । प्याक गरिको खानाभन्दा बढी फाइदा ताजा पकाइएका खानेकुरामा ताजा आफूलाई मन पर्ने किसिमले पकाएर खाने बानी बसालौँ । यदि आफन्तलाई को’रोना संक्र’मण भई आईसो’लेसनमा बसेको छ भने पनि ताजा र पोषिलो खानेकुराहरु खान दियौँ ।
४) चिसो पेय पदार्थ:- को’रोना संक्र’मित व्यक्तिले चिसो पेय पदार्थ तथा सोडा भएको पेय पदार्थको से’वन गर्नु राम्रो हुँदैन । को’रोना संक्र’मित व्यक्तिले भने तातो पानी, बेसार पानी, काँढा, कागती पानी जस्ता पदार्थको से’वन गर्नु नै राम्रो हुन्छ । कागती पानीले रो’ग प्रतिरो’धात्मक क्ष’मता बढाउन मद्धत गर्दछ । दूध बेसार पिउनु राम्रो मानिँदै आएको छ ।
काेराे’ना भा’ईरस बाट ब’च्न सबैले सामाजिक दु’रि कायम राखाैँ र साबुन पानीले मिचि मिचि हात धुने बानी बसालाैँ । जनहितमा जारी सन्देश ।। हा म्रा न्यु’जहरु हजुरहरुलाई कस्ताे लाग्छ कमे’न्ट बक्समा कमे’न्ट गर्न सक्नु’हुनेछ ।
५२६ पटक हेरिएको